प्रयोगशालामा स्वाबको थुप्रो, परिक्षणको दायरा किन बढ्न सकेन ? यस्तो छ कारण – Sudarshan Khabar
प्रयोगशालामा स्वाबको थुप्रो, परिक्षणको दायरा किन बढ्न सकेन ? यस्तो छ कारण
पीसीआर रिपोर्ट आउन हप्ता दिन लाग्नु सामान्यजस्तै भएको छ । प्रयोगशालाहरुमा संकलित स्वाबको थुप्रो लागेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ल्याबमा २५ हजारभन्दा बढी स्वाब कोभिड–१९ परीक्षणका लागि पालो कुरिरहेका छन् ।